[Ankapobeny ] 31 Martsa, 2009 12:34
Sabotsy mihosindrà BIS!!! TGV Mpamono olona
Faty mikararana ao @ 13mai @ izao fotoana izao! ary hejehina basy hatrany ankadivato ny vahoaka @ izao isika manoratra izao. Ho sahy hilaza ny marina ary ve ny HAT? Izao ve ilay demokrasia. Ho avy eo ny tohiny rehefa avy eo. Mpamono olona ny TGV tokony hiala izy.
Vahoaka maneho hevitra Analik'isa no vonoina toy ny mamono akoho. Mbola hitsara ny tantara.
Bala tena izy hamonoana vahoaka!!! Aiza ilay fahafahana nodradraina fahiny e! Kay mora ny miteny rehefa tsy mitondro fa rehefa eo kay mitovy daholo ny habibina ko
Misaotra Dadazily a! Izao ny olona rehfa tia tanindrazana sahy managana an'iny saina iny tsy mila basy aman-tafondro fa dia ny voninahitrin'ny fiandrianam-pirenena no akarina avo. Raha ireo miaramila nisambotra azy kosa dia tsy mendrika na ny hiankajo an'ireo fanaminy ireo aza. Tsy olona nananimbohitra io fa malagasy ohatr'azy any kanefa dia novonina ihany koa.
[ (39) Hevitra ] | [ (0) Verindrohy (trackback) ] | [Rohy maharitra]
[Ankapobeny ] 25 Martsa, 2009 08:46
No comment!!! Sady Classe no Qualité
Tapaka avokoa ny tombotsoa azon'ny mpisam-panjakana toy ny fiara fampiasa sy ny tapakila @ soilika ny fahana an-telefoana sy ny sisa. Mitady raharaha ilay HAT ity e! Efa maiakapeo ny olona maro eny anivon'ny minisitera isan-tokony eny ka ho hita eo ihany.
[Ankapobeny ] 23 Martsa, 2009 10:26
Afabaraka i Madagasikara
Tao aorinan'ilay fianianana nataon'ny Filoha ny tetezamita Andry rajoelina dia afabaraka tanteraka ny malagasy satria dia olona tsy lanin'ny maro an'isa akory (tsy nisy fifidianana) dia nahasahy nisalotra ny samboady maha filoha ny repoblika!!! Manaiky izao fanoganam-panjakana izao koa izany ny eo anivon'ny HCC.
Loza inona re ity e!
I Andry Rajoelina moa no filoham-panjakana zandriny indrindra eto afrika raha ny taona no jerena. Tsy nisy nanatrika izao moa ny teo anivon'ny FFKM fa i Monsenera Odon Razanakolona no naningana. Tsy teo ihany koa ireo Jeneraly 3 tokony hitondra ity tetezamita ity kanefa dia nilaza izy ireo oe tsy nisy faneriterena moa t@ ilay taratasy namidrany ny fahefana ho an'i Andry Rajoelina.
Nifaly sy nitotorebika tokoa moa ny Taranak'i Gallieni Vaovao TGV ka nampifalina t@ afomanga sy ny bal populaire ny olona ny alina. Tena hipoka kosa aloha ny kianja be ny Mahamasina e! sarotra ny handainga sady tsy fomba koa. Dia hoy aho oe vokin'ny afomanga sy ny bal izany ireto taranak'i Gallieni Vaovao ireto izay hita sy tsapa tokoa oe olona tsy tsotraky ny fiainana akory.
Ny hany tsapako sahady izao omaly dia filma efa nandeha daholo ireny amiko tsy nisy zavatra vaovao mihitsy fa saika ny fihetsika rehetra nataon'ny Filoha Ravalomanana avokoa no nadikan'i Andry Rajoelina hatreto ka manahy aho oe sao dia disc gaoka ary izy ity e! Tsy ahita fiovana akory isika fa ny eo ihany no eo. Izany ohatra dia hita sahady eo @ haino amanjerim-panjakana TVM ny fitongilanana be makany @ fitondrana TGV ahiko ho voadotra indray izy io ao aorina kely ao. Aza hitako indray marina. Tsy nisy feo mikasika an'Ambohijatovo sy Ambohitrimanjaka mihitsy mantsy. Izay hetsika natao ny olona tsy mankasitraka izao fanonganam-panjakana izao.
Mety hiova endrika indray mantsy ny olona mpitolona etsy @ 13mai ary hinoko fa tsy mbola vita ity lalao ity fa mbola tantara hitohy indray. Re ihany koa fa afaka 30 andro sisa dia lany ny tahirin-tsolika eto Antananarivo. Dia tena ahita fiainana milamina @ izay isika rehetra izany izao.
[ (19) Hevitra ] | [ (0) Verindrohy (trackback) ] | [Rohy maharitra]
[Ankapobeny ] 21 Martsa, 2009 08:50
Mety mba ahavita noho ny teo aloha ve ny HAT?
Ratsy fiaingana sahady ny tetezamita satria tsy misy mankato azy ny firenen-dehibe rehetra afats'i Frantsa irery. Mandeha koa ny feo fa tsy handray karama intsony ny mpiasam-panjakana manomboka @ volana ambony ho avy io satria efa tapaka ny famatsim-bola avy any ivelany izay mampiodina ny 75% ny tetibolam-panjakana.
Ka sao dia mba hanao tantely afa-drakotra ny volam-panjakana fotsiny ary ireto fahefana tetezamita ireto raha izany satria nilaza ry zareo mantsy oe amidy ny "air force one" ka ny 10% ny vola dia anamboarana hopitaly. Ary ny 90% kosa dia atao inona? Efa fantantsika ny valiny. Mora tokoa ny mandrava fa ny managana kay sarotra. Tsy vitan'ny vava be fotsiny izy io. Izao tokoa no oe mba manaova raha mahavita e!
Maro tokoa ny olona no miandrandra fiainana hidina sy ho mora kanefa dia ny mifanohitra @ izay no hita ankehitriny. 32.500 Fmg sahady ohatra ny vidiny menaka ary any @ 40.000 Fmg any ny menaka vahiny. Ny dibera moa dia vidina 15.000 Fmg raha 9.000 Fmg teo aloha. Efa any ho any ilay sambo hitondra ny menaka 10.000 Fmg e! Aza taitra mihitsy fa ho mora lavitra ny fiainana tsy ho toy ny t@ andron-dRa8. Ho mora daholo ny zava-drehetra arak'ireo nampanantenaina tetsy @ 13 mai e! Izay rahateo no nanonganana an'i Ra8 oe nagoron-karena loatra oe.
Izany eo ihany fa miseho lany sahady ny korontana eo @ samy tetezamita ankehitriny. Any Toamasina dia nosoloina an-keriny ny lehiben'ny faritra ary nosoloina ekipan'ny Tgv! tsy manaiky anefa ny ekipan'ny Rolland Ratsiraka ka mamory olona ao @ lycée teknika ao foana ary mitady ny hijoron'ny firenena federalista ka i Rolland no prezida. i Sylla koa tsy miala mihitsy fa izy koa hono mba nitolona t@ ora farany ka mba mety ho prezida ihany koa ho voninahitry ny faritra atsinanana. Dia toy izany koa ny ao Toliara i Lahiniriko no prezida tsy mila an'i Rajoelina koa ry zareo. Mbola raharaha ihany koa ny handravina izany. Maninona moa raha tonga dia tendrena ho Lehiben'ny Faritra ry zalahy ireo de mipirina e! Ireo koa no hanimba ny fihinanana vao hanomboka ity.
Loza koa no nataon'ireo mpomba ny tgv ireto etsy nanisana satria dia nozaraina ny tany ao @ minisitera ny fambolena sy fiompina ka samy mba mamaritra izay toerana tiany eo daholo ny rehetra. Io anefa dia tany nomena ny amerikanana anaovana "projet pilote" ao anatin'ny 99 taona efa vita bail izany. Dia mbola manjaka ihany ilay fanjakan'ny baroa e.
Nanafarana an'i Rossy mihitsy ny lanonana androany eny Mahamasina ka ho fety be eny zao sady hisy ny bal pôpilera ihany koa rahalina. Tsy maintsy hifalina foana kosa ny zavatra rehetra na azo t@ tsy fahamarinana aza ny fahefana e! Tsy misy hanatrika eny moa ny akamaron'ny ambasadaoro miasa sy monina eto amintsika. Mbola hanigana eo ihany koa i Lafrantsa sy ny ao @ katolika e! Asa ny FFKM raha ho avy na tsia? Ny fahatongavana eo moa dia midika avy hatrany fa fiandanina @ Andry Rajoelina.